Amazon Echo Ratidza gumi, skrini, ruzha uye hunyanzvi, zvakakosha here? | Gadget nhau
Miguel Hernandez | 11/06/2021 10:00 | General, Reviews
Amazon inoenderera mberi nekushanda kuunza ayo maA Alexa zvishandiso kumba kwedu nyore sezvazvinogona, avo vane basa rekupa mukana wekugadzira imba yakabatana pamutengo wekupinda uye nehunyanzvi hunogona kutarisirwa kubva parizvino tekinoroji.
Iyi Echo Ratidza gumi ndeimwe yezvazvino zvinowedzerwa uye pasina kupokana inonyanya kufarira maererano nekambani yakazara katarogu. Tichaongorora zvakadzama iyo nyowani yeAmazon Echo Show 10 kubva kuJeff Bezos 'kambani uye tione mashandiro ayo, Tsvaga nesu uye nekudaro iwe uchafunga kana zvichinyatso kukosha kana kuti kwete kuwana imwe yacho.
3 Alexa inokutevera kwese kwese
4 Screen uye kurira
5 Shandisa ruzivo
Pane ino nguva, Amazon yakasarudza dhizaini yakasarudzika, kunyangwe hazvo kuti kusvika parizvino mutauri anga ari kumashure kwescreen sechiwedzero, izvozvi zvese skrini nemutauri zvakarongedzwa zvakazvimiririra asi zvakabatanidzwa. Gudzanzwi iri kumashure, kwakazara cylindrical, rakafukidzwa nenylon mumavara anopiwa nekambani yeNorth America. Kune chikamu chayo, iyo skrini ine ruoko runofambiswa munzira yakatwasuka iyo inobata iyo LCD pani. Kana ikakunyengetedza, mutengo wayo uri kutenderedza 249,99 euros paAmazon
Mavara aripo: Anthracite
Iyi LCD pani ichave iyo nzvimbo yepakati yeAmazon Echo Show 10 ine kamera iri munzvimbo yepamusoro yekurudyi, nepo mune yepamusoro bezel tichava ne «mbeveve» bhatani uye mabhatani anodzora vhoriyamu yemutauri. Iyi 10-inch pani inozivikanwa, asi sezvazvinowanzoitika mune izvi zvinopinda-chikamu zvigadzirwa kubva kukambani yaJeff Bezos, matte plastiki ichave yakawanda. Sechinhu chinonakidza, munzira yekumisikidza isu tichagadzirisa mafambiro echiratidziri, uye ndiyo imwe yemapoinzi ekutanga echigadzirwa uye zvatichazotaura pazasi pazasi.
Panyaya yemipimo uye huremu, tinowana mudziyo unorema, tine 2,5 MaKirogiramu atisinganzwe chero chinhu kupfuura iro bhokisi rinosvika. Kana iri saizi, isu tine 251 x 230 x 172 millimeter, kunyangwe zvingaite senge "zvine mukurumbira", chokwadi ndechekuti dhizaini yayo inoibatsira kuti isaburike zvakanyanya kunyangwe iine gumi masendimita epaneru anotenderera ane hunyoro hwekurerekera.
Chigadzirwa chine tambo isina waya WiFi ac ine MIMO tekinoroji uye muA2DP uye AVRCP protocol, zvisinei, mukutaura isu tine Amazon Fire piritsi "yakanamirwa" kune mutauri. Kwidza chidzitiro processor MediaTek 8113 Iine processor yechipiri yatisingazive iyo hunyanzvi hunhu, hunotsanangurwa neAmazon seAZ1 Neura Edge, isu tinofungidzira izvo zvakanangana nekuita kweA Alexa.
10 MP kamera ine michina yekukiya system
2.1 redhiyo sisitimu
2x - 1 ″ maTweeters
Inosanganisira 30W simba adapter ine AC port
Tine Zigbee protocol yeimba yedu yakabatana uye ambient light sensor, sezvinoitika mune mamwe maspika ekutaura kubva kukambani yeAmerica Isu tinofanirwa kutaura nezve mota yayo isina bhurasho ine 180º kutenderera iyo ichaibvumira iyo kuti ititevere isu kuburikidza nekamera yechigadzirwa. Isu hatina dhata nezve RAM kana yekuchengetera mukati kwechigadzirwa.
Alexa inokutevera kwese kwese
Mukugadzirisa isu tichaisa kona yekutenderera uye nzvimbo yechigadzirwa kuitira kuti, sezvatakambotaura, ititevere isu tichitaura nayo kana kuita zvinhu. Izvi zvinonyanya kufadza kana semuenzaniso isu tiri mukicheni uye isu tinoda kugadzira iyo yekubheka, kana isu tiri kutarisa yedu chaiyo vhidhiyo pasina yakawandisa matambudziko. Pasina kupokana, zvinoita sekubudirira chaiko kana tichifunga kuti ichi chingave chimwe cheasina kusimba mapoinzi eiyo Echo Show yapfuura, saka hatina matambudziko nemaakona ekuona.
Saizvozvo, isu tine rutsigiro izvo inotibvumidza kuti tigadzirise iyo yekuona yakatarisa kumusoro, kwete yakawanda, asi yakakwana kuti iite seyakagadzikana sezvinobvira kushandisa. Iyo skrini inopindura zvakanaka uye kupenya kugona kunopfuura kukwana.
Screen uye kurira
Isu tinotanga neiyo sunod, iyi Echo Show 10 inozvidzivirira chaizvo, ine matatu-inch neodymium woofer uye maviri ma-inch tweeters. Zviri pachena kuti iri kure neAmazon Echo Studio, asi inopa zvishoma kurira kurira kupfuura iyo Amazon Echo yechizvarwa chino. Iyo yepakati nepasi mabass anoremekedzwa zvishoma uye inoratidzirwa kuve inopfuura yakakwana sarudzo yekuzadza chero imba kana kamuri, kunyangwe inogona kunge iri yeisina kukwana mhando kune yakakwana nerupo kamuri. Unogona kuitenga kuAmazon, seyakajairwa nzvimbo yekutengesa, kunyangwe ichionekera mune imwe MediaMarkt.
We have Dolby Atmos kugarisana, kukanganisa kwakaderera uye kunodzivirirwa nenzira inokudzwa. Zviripachena zvinotora mubhadharo pamabhasi, asi iwo maapakati uye akakwirira ane mhando yakakwana.
Kana iri yechidzitiro isu tine 10,1 inches of touch panel IPS LCD. Iyo skrini haina kupenga, isu tine 1280 x 800 resolution, kureva HD, iyo inoenderera isingakwanise kunakirwa nemultimedia zvemukati sezvinodiwa nemakoni, zvinonyadzisa kuve ne10 ″ pani. Isu hatina chero chekubatana kwekunze muchimiro chekuchengetedzwa kwemultimedia, saka tinozozvimisikidza kuAmazon Mapikicha kana masevhisi ekubatanidza gore anotsigirwa neiyi kifaa.
Iyi Amazon Echo Show inoshanda zvakare seyekuwedzera kweA Alexa kune imwe imba yakaoma yakabatana, ndakaifarira zvakanyanya mukushandisa kwayo kunyangwe iyo isingape chero chikamu chine hunyanzvi maererano neiyo Inoshanda Sisitimu iyo dzimwe shanduro dzeAmazon Echo Show mount. Tine mudziyo unopindura zvakanaka uye unotibvumidza kugadzirisa ese ma parameter emidziyo iyi yaimbofananidzwa neAmazon Alexa.
Mune yangu kesi, ese maIoT zvishandiso mumba mangu zvakagadzirwa uye nekudyidzana neAkiel, saka zvave zvakagadzikana uye zvine mutsindo kwandiri kuti ndishande nePhilips Hue, Sonos zvishandiso uye kunyangwe nemhepo yekugadzirisa yakagadziriswa kuburikidza neBroadLink. Ehezve, isu tinofunga nezvekuti isu tiri kutarisana nechishandiso chine muyero mutengo uri kutenderera mazana maviri nemakumi mashanu emaeuro. Ichashanda seimwe nhanho kune zvakajairika zvigadzirwa zvemumba, uye nokutendeseka, zvinoita kuti kutonga kweimba yakabatana kutakurike nekutenda kuchionioni chayo, kuve yakasarudzika kuve nayo mukicheni kana mukoridho, asi iri kure nekuve chishandiso chekupinza renji nemutengo.
Echo Ratidza 10 (2021)
Yakatumirwa pa: 11 June we2021
Kugadziridza kwekupedzisira: 6 June we2021
Zigbee protocol uye hombe screen
Kugadziriswa kunogona kuvandudzwa
Izwi haritauri kune 250 euro mutauri
Yakazara nzira kuchinyorwa: Gadget nhau » General » Amazon Echo Ratidza gumi, skrini, ruzha uye hunyanzvi, zvakakosha here?
Echo Ratidza 5 (2021) - Kamera iri nani uye kurira muchizvarwa chitsva ichi [TARIRA]